Banyere Anyị - Changzhou chọsiri ike Motor Co., Ltd
Ngwakọ STEPPER Motor
Emechi LOOP STEPPER Motor
BLDC moto ọkwọ
Mechiri emechi akaghị moto ọkwọ
stepper moto ọkwọ
Ngwakọ gearbox Motor
Breeki ngwakọ STEPPER Motor
nema17 breeki moto
nema23 breeki moto
3D ngwa nbipute
CNC ngwa iwu
Changzhou chọsiri ike Motor Co., Ltd e guzobere n'afọ 2000, dị ka a ọkachamara moto emeputa na Changzhou obodo, China. Mmepụta ike karịa karịa 0,6 nde Motors kwa afọ. Anyị Company na-enye atọ isi usoro nke ngwaahịa: ngwakọ stepper Motors, DC brushless Motors na moto-akwọ ụgbọala.
The aṅụ ngwaahịa akara na-eresị ya isi n'ichepụta Companies maka Mmeputa nke akpaaka, ọgwụ na ahụ ike na nlekọta ahụ ike na ngwá, ngwa nbipute igwe, mbukota ngwaọrụ, Ozi Technology, ezinụlọ ngwa oru na ngwaahịa, na pumping akụrụngwa.
Anyị nwere Engineering otu na ọtụtụ afọ nke ahụmahụ na-ngwa Engineering, imewe Engineering na ọhụrụ Ọganihu equipment.Our Engineering Staff ihe kasị mma na àgwà ngwaahịa na ọrụ mgbe ngwaahịa a na-anapụta anyị Ahịa. Changzhou chọsiri ike Motor Co., Ltd nwetara ya ISO9001: 2000 asambodo na ọtụtụ n'ime anyị na ngwaahịa ndị OA mma.
Anyị Company-agbaso ụkpụrụ nke "na-enye akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ngwaahịa" na ihe niile anyị na ngwaahịa ndị RoHS Dabara. Dị ka a zuru ụwa ọnụ soplaya, Changzhou chọsiri ike Motor Co., Ltd nnọọ ndị a na-ahụ ụkpụrụ nduzi nke International Commercial Iwu na Omume. Anyị na-egosipụta aha ọma anyị nke imekọ ihe ọnụ na anyị Ahịa karịrị afọ. Mgbaru ọsọ anyị bụ "Mmeri ahịa na àgwà na ọrụ" nke bụ nkịtị olu ọ bụla Changzhou chọsiri ike Motor otu otu.
Ịrụkọ ọrụ ọnụ, na-eto ọnụ!
Okwu: No.1 ZhengDa Road, ED-Mpaghara, Changzhou City, Jiangsu Province, China